Kiss Mukomana Girl Pendant Fashion Stainless Steel Jewelry Set nokuda Valentine - China Jinyun Jewelry
Stainless Steel hwamakumbo
simbi waya bangles
Stainless Steel nezvishongo
Chain linked zvamaoko
Watch Band nezvishongo
Stainless Steel zvenzeve
Stainless Steel chishongo Sets
Semi-inokosha Stones Jewelry Sets
Stainless Steel semanekiresi
Pendants vane Chains
Semi-anokosha Stones Pendants
pajira riya zvindori
simbi ruvara zvindori
Kutsvoda Mukomana Girl Pendant Fashion Stainless Steel Jewelry Set nokuda Valentine
mutengo / $: 1,2835
uremu / g: 7.2
Tumira neindaneti kwatiri More Latest Products Download as PDF
About isu Julong Jewelry rakaumbwa muna 2006. boka redu riri muna Guangzhou, China. Tiri nyanzvi Stainless Steel Jewelry Wholesale kubudikidza B2B uye vave nemakore anopfuura 10 bhizimisi mutsetse uyu. Saka kure, tave pamwe vanopfuura 300 bhizimisi kubvira ipapo uye kuti chinonyanya yakakunakira muripo nzira, yakanakisisa mitengo uye mabasa kuti vatengi dzedu. Kune zvinopfuura 100,000 mazano akasiyana-siyana munogona kuwana kubva Website yedu, www.julongsteeljewelry.com . Vose mhando itsva achapiwa yoku- ne pavhiki pamusoro kupfuura 2000pcs zvigadzirwa zvitsva. Products mapurani siyana zviri zvikuru kwazvo uye chinogona kuzvigutsa zhinji vatengi zvakasiyana kunyika dzakasiyana 'zvinodiwa. Tine zvinopfuura 10,000 vakanyoresa nhengo vari kubva munyika yose, vangadai kazhinji kuti nguva kuti kuzodzosera Muchengete kwaizovaunzira vazhinji yakakunakira kubva vatengi edu chete tinoda anenge 3-15 mazuva kugamuchira zvinhu zvavo.
We zvinopa yakaderera chaizvo mutengo zvinhu uye nokukurumidza uye nyore muripo nzira, akadai Pay-pal, Bank kuchinjwa, pamwe Western uye Mari giremu. Kana uchifarira, ndapota usazeza kutaura nesu. Email: julong@julongsteeljewelry.com Whatsapp: +86 18028698162 Shuwiro yakanaka Ndezvipi mashoko chigadzirwa yako? . Material: yepamusoro Stainless simbi . Features: hapana nickel, kutungamirira, ngura, kudzivirira ganda . Rakagadzirirwa pachake kusakara kana kuti baba, mai, shamwari, murume nomudzimai, vaviri Christmas, Halloween, rokuberekwa, gore zvipo. . 1 00% vaedzwa, 100% unhu kunyatsodzivirirwa! . Use girazi makorari, saka kuti pose Gloss zvakawanda unaku. . Pashure wakaisvonaka vazhinji nokugeda, kwakakwana. Flat pasina protrusion. Nei wakasarudza boka rako? Main zvinogadzirwa - pendant marozari, norwonzi, nezvishongo, nezvindori, zvomunzeve, nezvomumutsipa, anokosha nezvindori, etc.
Various Stainless simbi nenhumbi. Business womuenzaniso - tiri nyanzvi uye ruzivo zvishongo mugadziri kubva 2006. Quality kudzorwa - tine vana muchinyatsongwarira yepamusoro kuzvidzora nzira uye kuvimba chete basa redu. R & D - tine nyanzvi chikwata vamwe vari nehanya fashoni nenhumbi. Kuremara dzosera Gwaro - - isu mukanyatsoteerera kuongorora zvinhu zvose 3 nzira pamberi zvacho. Kana paine dambudziko unhu nokuda wakurukura, tapota anotiudza munguva (mukati memazuva 15 pashure ukagamuchira pasuru). Tichafara dzosera iwe kana kutsiva iwe inotevera hurongwa.
Tinotenda kuti muvhunzo. Tiri Stainless simbi zvishongo mugadziri uye wholesaler, saka moq wedu USD 300, 3 hrs por kugadzira pa saizi. Asi kana uchinyatsoda mharidzo kuedza, unogona kurayira USD 100 kanenge, kutumirwa mari iri pamusoro USD 30 1 kg. Wish tinogona kuvaka zvebhizimisi uye ushamwari nani. Shuwiro yakanaka Bella
Taura nesu Tinogara tiine munhu paruoko kupindura mibvunzo yako. Tinotenda muna timeliness kuti vatengi, uye tichaita zvose zvinogoneka kugutsa vatengi vedu. Kana muine matambudziko, anoti, kana mazano, tapota nyorera nesu. email: julong@julongsteeljewelry.com Nhengo Level: (accoring wako kuti mari, uchanakidzwa yakasiyana chechetere disccount) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
Kana isu takagamuchira zvakawanda mirairo ose zuva, isu kuchinja vedu vanoshanda kwacho kuitira kupa nani basa makasitoma edu uye nechokwadi vatengi vedu vanogona kugamuchira zvirevo nenguva. Inotevera vedu vanoshanda matanho matsva: (Maererano Bejing Time) 1. ose mangwanani, nokuti zvose mirairo idzva vanobhadharwa kare asati 12:00 masikati, ticharamba kuzvironga uye tarisa Nehunde panguva iwoyo. Kana kuti muripo pashure 12:00 masikati, ticharamba kuzvironga uye tarisa Nehunde zuva raitevera. 2. Kana wakagamuchira kurongedza list, kana iwe unogona kuita chokupedzisira muripo pamberi 6:00 pm, tinogona anotakura kubva hurongwa nenguva manheru. Kana kuti muripo pashure 6:00 pm, tichava anotakura kunze uchitanga rakatevera. 3.For murayiro izvo vanobhadharwa kare, kana waita achiwedzera kuti ndakapedza nengaidzo pamberi 12:00 masikati, isu achakumutsirai wokupedzisira chiputiriso mazita panguva iyoyo manheru uye anotakura kunze uchitanga rakatevera. Kana makaita achiwedzera kuti yokupedzisa nengaidzo pashure 12:00 masikati, isu acharonga kuti kuwedzera runyararo uye kutumira rwokupedzisira chiputiriso mazita zuva raitevera kuti iwe uye hurongwa achava anotakura shure mangwana. Usati kuti murayiro, ndapota nomutsa kuronga nguva maererano ako ezvinhu. Sorry chero zvivanakire kuti akaita kwamuri. Kana muine mibvunzo, tapota inzwa wakasununguka kuonana nesu. Ndatenda. Shuwiro yakanaka.
Paypal nhoroondo: julong@julongsteeljewelry.com Western Union Tapota taura nesu usati kuti muripo nokuda kumadokero pamwe, kuongorora zita mugamuchiri wacho. Bank Kutamisirwa Information Company nhoroondo
Munhu anoyamurika Bank Name HSBC
zita kambani Jinyun Trade Limited
Bank Account hapana 801406885838
munhu anoyamurika Bank 1 Queen kuti Road Central, Hong Kong
KURUMIDZAI Code HSBCHKHHHKH
Shipping Policy We anotakura upi kero munyika. Items akarayira kubudikidza nesu anotumirwa ne EMS kana TNT kana dhl kana FEDEX kana kupota. We vachakutaurira pamwe club No. ne e-mail mangoti kuitira yako yakawanda ndokutumirwa patinowana kubva aiva kambani. A Kero mumigwagwa runodiwa pakukurukura. Merchandise achaiswa mureza Air-achitaura nemasuo, zvinotora inenge 3-5 kushanda mazuva. Delivery nguva hadzirishandisi kugadzira nguva. Zvigadzirwa yedu yakawanda ndokutumirwa ose zuva, kubva Muvhuro kusvika Mugovera, kunze nemazororo. Zvinorayirwa Most akaisa pamusoro mevhiki chichange nengarava muna 2 kana 3 days, apo mirairo akaisa kwevhiki vachange nengarava zvinotevera Monday. Uchawana e-mail simbiso pamwe nhamba yako Tracking. Maawa makumi maviri nemana pashure ukapiwa nhamba yako Tracking, iwe uchagona chamber hurongwa yako paIndaneti panguva http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com http: / /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com Delivery nguva zvinosiyana zvichienderana munyika kuenda.
Shipping Nzira Delivery Our julong zvishongo anovaka hwakasimba tikabatana nezvose hombe ina kutumirwa makambani: dhl, nemateru, FEDEX uye TNT kupa nyanzvi yose pasuo nesuo pakusununguka. Delivery Time Items chichange nengarava kubva inotevera zvebhizimisi mazuva waita zvazvakaipira. Kazhinji, zvingatora anenge 3-5 mabhizimisi mazuva pakukurukura, zvichienderana yakasiyana pakukurukura zvinoreva iwe sarudza. Hatina mhosva chakaipa kana undeliverable kero. Please nechokwadi chako kutumirwa kero akarurama uye deliverable. Order Tracking We kubvumira kuti chamber hurongwa chako watinya ane mbeva. Kana ainge atumirwa wako kunosimbiswazve, muchapiwa nhamba iri club kwako nokusimbisa e-mail. Zvicharamba kuzotora chinhu changu kusvika kwandiri? Tapota cherechedza kuti mazuva ebhizimisi, dzakakudzingai Mugovera, Sunday uye Public Holidays, vari akaverenga nemashoko makurukuriro kumwedzi. Kazhinji, zvinotora inenge 3-5 mabhizimisi mazuva pakukurukura. Ndingaitei chamber ainge atumirwa yangu? We anotakura kutenga yako kuguma rakatevera mabhizimisi zuva pashure waita achiongorora-pamberi. We aizotuma e-mail pamwe Tracking nhamba saka unogona kumisa kufambira mberi ako panguva mutakuri 'Website. Ndinofanira kuitei kana ainge atumirwa wangu haana anosvika? Ndapota kubvumira kusvika 10 mabhizimisi mazuva kuti chinhu chako kununurwa. Kana zvakadaro asingadi anosvika, tapota kwatiri kuburikidza nekudzvanya kuti "Contact Us" bhatani pamusoro Website. Ticharamba kudzokera kwamuri nokukurumidza.
Previous: Stainless Steel couple Jewelry Chinese Couple Love Fashion Heart Pendant
Next: The itsva Korea manyorerwo Stainless simbi vanoda mwoyo zvechizarira kiyi pendant
zvemishonga & Pendants
Stainless Steel Pendants nemazango
Wholesale promotional Stainless Steel Anoda Pen ...
Pair Men Women Stainless Steel Anoda couple Ne ...
The itsva Korea manyorerwo Stainless simbi mwoyo zvechizarira ...
Stainless Steel couple Jewelry Chinese couple L ...
Factory kutengesa Stainless simbi vakaroorana mwoyo hove dzakawanda ...
Stainless Steel Letter Hafanana Heart Tag ...